meheradaha ganacsiga yaryar - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Archives Tag: ganacsiga yaryar
Marka dib loo furayo, gobolka wuxuu bilaabayaa muraayada SmartWA si looga caawiyo ganacsiyada yaryar inay si nabad ah dib ugu furaan
Dashboard-ka SmartWA iyo aaladda go'aan qaadashadu waa mid ka mid ah mashaariic dhowr ah oo bilaw ah oo loogu talagalay in lagu taageero ganacsiyada yaryar iyada oo loo marayo COVID-19 OLYMPIA, Wash. caafimaadka iyo badbaadada ayaa ah mudnaanta koowaad. Si looga caawiyo milkiileyaasha ganacsiyada yaryar inay aqoonsadaan borotokoollada nabadgelyada ee u badan inay muhiim u yihiin macaamiisha, Washington
Ganacsiga ayaa abaalmarin $ 234 milyan wareega afraad ee Work WA deeqo ganacsi oo yar yar
In ka badan 20% ka mid ah 11,697 deeq bixiyeyaashu waxay yiraahdeen waxay u isticmaali doonaan lacagaha dib u furida OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa ku abaal marisay $ 234 milyan oo dheeraad ah gargaarka Washington iyo deeqaha soo kabashada 11,697 ganacsiyo yaryar oo saameyn ku yeeshay aafada. Kuwa qaata deeqaha, in ka badan 20% waxay tilmaameen inay lacagta u isticmaali doonaan si ay uga caawiyaan dib u furista, halka inta soo hartay ay sheegeen inay dabooli doonaan kharashaadka hawlgalka.
Ganacsiga wuxuu bilaabayaa wareeg cusub oo ah tababarro ganacsi oo khadka tooska ah oo bilaash ah, oo ay kujiraan fasalka koowaad ee fiidkii
ScaleUp: The Rebuild Edition wuxuu ku darayaa sadex taariikhood oo kalfadhi oo cusub oo lala bartilmaameedsaday ganacsiyada yaryar ee la aasaasay kuwaas oo raadinaya inay koraan marka la eego COVID OLYMPIA, WA - ScaleUp: The Rebuild Edition, oo ah iskaashi u dhexeeya Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington iyo Golaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Thurston. Jid cusub oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar ee daneynaya inay gaaraan koboc weyn kadib COVID. Koorsooyinka onlaynka ahi waa toddobaadkii hal mar illaa siddeed toddobaad.
Iskaashigu wuxuu ku darayaa darsin ururo cusub oo ku baahsan gobolka oo dhan oo fidiya gargaar farsamo oo ku dhow 40 luqadood milkiileyaasha ganacsiyada yaryar ee ay saameysay COVID-19 OLYMPIA, Wash - Baahida milkiileyaasha ganacsiyada yar yar ee isku dayaya inay ka soo kabtaan aafada waa kuwo aad u tiro badan oo kala duwan. In kasta oo milkiileyaal badan oo ganacsi leeyihiin xiriirro iyo ilo dhaqaale oo ka caawiya inay galaan barnaamijyada gargaarka iyo samafalka, haddana waxaa jira caqabado waaweyn oo ka horjoogsanaya kuwa kale oo badan inay helaan